Mutauriri webato reZanu-PF, VaSimon Khaya-Moyo, vanoti gwaro richabuda kubva munyaya dziri kupomerwa vanoona nezvegwara rebato muZanu-PF uye vari gurukota rezvematunhu, VaSaviour Kasukuwere, nemunin’ina wavo uye vari sachigaro webato iri kuMashonaland Central, VaDick Mafios, richaendeswa kumutungamiri wenyika nebato iri VaRobert Mugabe.
VaKhaya Moyo vati zvinenge zvave kuna ivo VaMugabe kuti votura gwaro iri kuPolitburo here kana kuti kwete.
Asi VaKasukuwere vanenge vave kumbofema zviri nani mushure mekunge bazi remadzimai reWomen’s League raramba kutora danho panyaya yavo apo rakasangana neChitatu.
Matunhu gumi uye veZanu-PF Youth League vakati VaKasukuwere ngavadzingwe mubato pamwe nemuhurumende.
Asi VaKasukuwere vakaona rutsigiro rwakasimba kubva kuvamwe vanonzi vari muchikwata chavo cheG40 vanosanganisira mumwe mutevedzi wemutungamiri wenyika, VaPhelekezela Mphoko, uye gurukota rezvedzidzo yepamusoro VaJonathan Moyo.
Mamwe masachigaro nevanofungidzirwa kuti vari kuchikwata cheG40 vanoti vari kutya kudzingwa mubato vachiti izvi zviri kuitwa nevanotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, avo vanonzi vanotungamira chikwata chinonzi Team Lacoste.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya iri kupa kuti mubato muite kunetsana kusingapere inyaya yekuti VaMugabe vakwegura uye havasi kuda kutaura kuti vachaenda rinhi pamudyandigere kana kudoma achavatsiva.
Asi bumbiro reZanu PF haripe masimba VaMugabe kuti vadome munhu anovatsiva, kunze kwekungodoma vatevedzeri vavo vaviri.
Izvi zvave kupawo kuti vakuru vemauto vapindire kuti ndiyani wavanoda kuti atore chigaro chekutungamira Zanu-PF kana VaMugabe vasiya basa iri kungave nekuenda pamudyandigere kana kufa.
Ko chii chinopa kuti vanhu vemuZanu-PF vatye kukwikwidza VaMugabe? Sachigaro weZanu-PF kuUK Province, VaNick Mangwana, vanoti VaMugabe vane rutsigiro rwakasimba ndokusaka pasina anoda kuyedza rwizi negumbo.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira Media Centre, VaEarnest Mudzengi, vanoti masimba akawandisa anaVaMugabe anopa kuti kukwikwidzana naVaMugabe kuve kupedzera hoko padehwe retsindi.